EMUI 10 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bisha Ogosto | Androidsis
Toddobaadyadan EMUI nooca 9.1 ayaa durba la bilaabay, taas oo ku soo socota taleefannada kala duwan ee Huawei. In kastoo lNooca Shiinaha ayaa dhameystiraya faahfaahinta EMUI 10, nooca cusub ee ku saleysnaan doona Android Q. Noocyadan lakabka ah waxaan dhagaysanaynay warar todobaadyo ah, oo leh daadinta sawirradaadii ugu horreeyay. Hadda wax badan ayaan ka ogaanay iyada.
Sababta oo ah waan ognahay goorma ayaa EMUI 10 si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa. Waa inaan sugnaa dhowr toddobaad si ay u noqoto mid rasmi ah, laakiin waxay ballanqaadaysaa inay noqon doonto daah-fur muhiim u ah nooca Shiinaha. Tan iyo lakabkani wuxuu ku saleysan yahay Android Q, sidii horeba loo yiqiin.
Waxay noqon doontaa shirka soo socda ee soo-saaraha, in Huawei u dabaaldego inta udhaxeysa 9 iyo 11 Ogosto Shiinaha, EMUI 10 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa. In kasta oo soo bandhigista koofiyaddu ay haddaba leedahay dhacdo gaar ah, oo la qabto 9ka markay tahay 15:20 pm, waqtiga maxalliga ah. Sidaas darteed waxaan ku dhejineynaa taariikhdan kalandarka.
In kasta oo soo bandhigisteeda ay tahay Ogosto, waqtigan la joogo ma jiro wax war ah oo ku saabsan taariikhda ay awoodi doonto in lagu rakibo taleefannada astaanta. Xaqiiqdii maahan ilaa Sebtember ama Oktoobar oo xilligan furmayo. Laakiin waa inaan sugnaa Huawei inuu waxbadan nooga sheego. Waxay u badan tahay inbadan lagu ogaan doono munaasabada.
EMUI 10 ayaa loo sii deyn doonaa qayb weyn oo ka mid ah taleefannada hadda jira ee sumadda Shiinaha. Waxay u badan tahay inay isku mid yihiin waxay heleen EMUI 9.1 toddobaadyadan. In kastoo ay tahay inaan sugno waxoogaa xaqiijin ah shirkadda. Dhanka kale, shirkaddu waxay sii wadaa inay ka shaqeyso HongMeng OS, oo ku imaan doonta telefoonno cusub.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waan noqon doonnaa Ka taxaddar wararka aan ka ognahay EMUI 10. Shirkaddu kama aysan hadlin wixii war ah ee aan ka filan karno noocyadan cusub ee cape-ka ah. Waxay umuuqdaan inay raadinayaan inay naqshaddu lamid tahay ta hada jirta, laakiin waxaan filan karnaa astaamo cusub oo kujira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » EMUI 10 horeyba waxay u lahayd taariikh xareynta
Tinder Lite ayaa si dhakhso leh loogu soo bandhigi doonaa telefoonada Android
Infinix Note 6 waa mid rasmi ah: taleefan casri ah oo wata kamarad saddex-laab ah iyo qalin-qalinka X Pen